Njani ukuthenga okanye kukrazulwa indlu kwi-Norway - Abaqondisi-mthetho ka-Norway! Isithai abaqondisi-mthetho, a isemthethweni portal.
Njani ukuthenga okanye kukrazulwa indlu kwi-Norway
Ezi schemes ingaba yanikezela wayecinga yobulali oomasipala
Ngokunxulumene IMF, Norway sele yesibini eyona imbi izindlu bubble ehlabathini, kodwa renting kusenokuba nangakumbi expensiveOslo esekelwe journalist Audrey Andersen sichaza indlela get izandla zakho kwi-propati. Nangona soaring iindleko ipropati, Norway sele omnye ephezulu amanqanaba ka-ekhaya ubunini Aseyurophu, kunye phantse pesenti Norwegians ezingama-kunokuba renting. Eyona njongo ka-isithai izindlu nkqubo kukuba kuba njengoko abantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka kuba ekhaya abanini-mhlaba. Kodwa abanye abantu benze kukrazulwa nonetheless kwi-ithemba ukuba amaxabiso kuba ngaphezulu iityuwadefault colour, okanye ekugqibeleni baya kwakha ngokwaneleyo imali yokuthenga izinto. A tenant kwi-Norway sele ngakumbi amalungelo kwe kwi-nakumanye amazwe.
Umzekelo, ngexesha ukuqeshisa ixesha azinako kuba ngaphantsi iminyaka emithathu, tenant unako aphelise le tenancy nangaliphi na ixesha ngaphandle nasiphi na isizathu.
Kuphela stipulation kukuba baya kunika isaziso ngokubhaliweyo. Amalungelo a tenant ingaba ngokuqina kwi-ukuqeshisa kwesi sivumelwano, kwaye Norway ke Tenancy Mthetho.
Xa ukuqeshisa ngu esayiniweyo, yerente iindleko kufuneka ngokubanzi kulandela i-consumer price index ye ubuncinane yokuqala iminyaka emithathu tenancy.
Oslo kwaye neighbouring khawunti, Brim, ingaba phakathi uninzi expensive. Encinane iimpahla ndakubona i-sharpest ukwanda ixabiso njengoko udibanisa ababonisi base renters, ezifana abafundi, kuba compete tenancy. I-avareji ngenyanga kukrazulwa kuba u-igumbi ihleli ukwanda nge. isibhozo pesenti phakathi kwesibini kwaye kwikota yesithathu ka. Umndilili u-bedroomed apartment measuring m kwi-nicer iindawo Oslo unako misela kuwe emva kangangoko NOK.
Residual inkunkuma ngu wabeka ngendlela eyahlukileyo bins
Kukrazulwa kukuba zange ihlawulwe ngaphezu kanye ngenyanga kwaye ihlawulwe ngaphambi kwexesha.
Tenants ikholisa kulindeleke ukuba anike idiphozithi ngokuchasene umonakalo no iinyanga ezintathu' kukrazulwa, apho kufuneka transferred kwi eyahlukileyo i-akhawunti ye-ixesha le-tenancy. Heating kwi-apartment iibhloko inje ojika ngaphandle kwi-Meyi kuba ehlotyeni ngenyanga. Rhoqo ngu-ayi ojika emva kwi kwakhona de emva kwexesha septemba, akukho mcimbi njani yingqele ngayo sixhobo. Esezantsi ukuqeshisa amaxwebhu iyafumaneka nge-consumer-arhente.
A ukuqeshisa abafanele ukusoloko esayiniweyo kwaye kuya kufuneka iquke uluhlu imixholo.
Landlords unako aphelise a tenancy kuphela ukuba kukho justifiable izizathu kuba ngokwenza njalo. A tenant unelungelo injongo kwaye termination siya kupheliswa ukuba landlord sele uthathe meko ukuba Conciliations Ibhodi - Kukrazulwa Disputes Isigqeba kuba Oslo kwaye Akershus Khawunti. pesenti ngaphezulu kwama, kunye wemiceli-ukuchongeka ebone kwi-Oslo kummandla, apho ipropati amaxabiso esifutshane phezulu ithoba pesenti phezu nyaka.
Umndilili m apartment unako misela kuwe emva jikelele, kroner (dollazi) okanye ngaphezulu, kunye namaxabiso kuba izindlu kwisixeko baphuma abantu abaninzi ke ixabiso umqolo.
Wokuqala ngena kwi-ukuthenga i-home kwi-Norway iqala nge mortgage isicelo, ukuba ngempumelelo, ukuvunywa nge-bank.
Ukuthenga ixabiso kwendlu okanye apartment izimisele nge-bidding nkqubo.
I-obaluleke ukugcina engqondweni kukuba yaba lwenziwa xa nomthengisi bafanele ukubonisa isamkele yakho ndithi. Kufuneka ke ngoko ungaze wenze i-kunikela ngaphandle kokuba uqinisekile ukuba ezithile ukuze yakho yezimali ingaba ukuze ezingaphambili. Izindlu kwaye apartments kuba ziyathengiswa kwaye kuba kukrazulwa ingaba rhoqo yapapashwa ngowe-wobulali newspapers. Mortgage repayment amathuba kusenokuba ixesha elide, kodwa ukuba ukuthenga kuba kuqala ixesha, uyakwazi avail ngokwakho yokuqala ka -ixesha umthengi mortgage. Oku mortgage isicwangciso kunye enye inzala kuba epheleleyo xesha, apho unako ukuboleka ukuya kwi-anamashumi amabini ekhulwini ukuthenga kwexabiso. Kuya kufuneka azise yakho irhafu kubuya aze ahlawule ukutyibilika ukubona indlela kakhulu ka-mboleko unelungelo lokuxhamla kuba kwaye inzala i-bank inikezela. Uyakwazi ukukhangela apho iibhanki kunikela elona nani liphantsi wenzala. I-isithai Karhulumente Izindlu Bank, Husbank, inikezela izibonelelo kuba yokwakha izindlu ezintsha okanye kuba renovation ka-ubudala iimpahla. Kukho, nangona kunjalo, engqongqo izikhokhelo nemigaqo-nkqubo ethe kuhlangatyezwane nazo. Izindlu izibonelelo ezifumanekayo abo experiencing osisigxina-mali iingxaki. Ezahluka-hlukileyo ezikufuphi kwaye amaphondo kwentlawulo ezahlukeneyo inkunkuma ukulahlwa schemes. Inkunkuma ngu ezibekwe kulo ezahlukeneyo ungowebala bins Umzekelo, blue bags kuba plastic. Kukho koomasipala Norway apho ulawulo kunye nokulawula inkunkuma, amanzi kunye ukugungxulwa."Dugnad"yindlela-ngokuqhelekileyo isithai tradition apho abahlali baza kuhlanganisa uluntu, idla kwi-entlakohlaza, tidy phezulu jikelele kwiindawo zokuhlala kunye yabelwe ethile, imisebenzi zinikezelwe ngaphandle ngamnye abathathi-nxaxheba."Dugnad"idla kuthatha phakathi isibini kuso kathathu iiyure ukugqiba. Umsebenzi umhla rhoqo lupheliswe ikofu, buns kwaye, kodwa kuyanqaphazekaarely, kunye yingqele beer. Kubalulekile ngokubanzi frowned phezu hayi nithabathe kulo msebenzi, kodwa nayo elungileyo indlela ukufumana ezaziwayo Norwegians.
Ulwaphulo-mthetho kwi-Norway abaqondisi-mthetho
Les lois sur les armes dans la Norvège des Avocats